Mifandraisa aminay | Mifandraisa amin'ny ekipa Zeevou
Manana fanontaniana ankapobeny momba ny Zeevou?
Midira ao amin'ny Zeevou Hub ary atsangano tanana.
Te hiaraka amin'i Zeevou na hanomboka fiaraha-miasa?
Liana hahafantatra ny fomba hanalefahan'i Zeevou ny teboka fanaintainanao?
Ao amin'ny Zeevou dia mino izahay fa hiantohana ny fahombiazan'ny mpiara-miombon'antoka amintsika, tsy mila manome vokatra tsara fotsiny isika fa mila manondrotra azy amin'ny ambaratonga lehibe amin'ny serivisy ho an'ny mpanjifa. Noho izany, raha manana olana na olana na sosokevitra ianao dia aza misalasala manatona anay.
Ny chat mivantana ataontsika dia misy 24/7 ho an'ny fanontaniana ankapobeny. Raha te hitatitra olana iray dia mba ampiasao azafady ilay fampiasa “Manangana tanana” natsofoka rehefa avy niditra tao amin'ny kaontinao ianao. Raha hijery akaiky ny rafitra, azafady mangataka a Demo maimaim-poana. Io dia hahafahanao misafidy elanelam-potoana hitsambikina amin'ny antso miaraka amin'ny Zeevou Partner Engagement Manager. Handeha hamakivaky ny rafitra iray manontolo ianao amin'ny alàlan'ny antso an-tserasera, ary hamaly ny fanontaniana rehetra mety anananao.
Miaraha aminay amin'ny resaka tsy fifanarahana
Ho an'ireo olana hafa, aza misalasala manome antso anay na mampandeha anay, manandrana mamaly ny fangatahana rehetra izahay ao anatin'ny ora vitsivitsy.
Etazonia: + 1 855 855 9789